मनोरञ्जन – PathivaraOnline
admin January 26, 2020 मनोरञ्जन	0
काठमान्डाैं । गीतकार तथा चलचित्र निर्देशक शंकर अधिकारीको निर्देशनमा निमार्ण भएको नेपाली कथानक चलचित्र मेरो दिल छ पोखराको आगामी फागुन ५ गते काठमान्डाँैमा विशेष प्रद्र्धशन गरिने निमार्ण पक्षले बताएको छ । कला राईको प्रस्तुतीमा रहेको सिनेमा मेरो दिल छ पोखरामा को बिशेष शो य फागुन ५ गते दिनको २ बजे
admin January 25, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
माघ ११, काठमाण्डाै । नित्याशिवाको आवाज रहेको ए काले तिम्रो गाउमा आउन मन लाउछ बोलको लिरिकल भिडियो नित्याशिवाको आफनै युटुब च्यानलबाट रिलिज भएको छ । गीतमा शहर मा बसेकी युवतिको गाउले एक युवासङ्ग प्रेम सम्बन्ध बसेपछिको उत्पिडन गितमा दर्शाइएको छ । यो गीत मा नित्याशिवाको साथमा संगीतकार सन्तोष प्रगाढले साथ
admin January 22, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
माघ ०८, काठमाण्डाैं । पशुपति शर्मा र जेरीले इन्द्रेणीमा दोहोरी गाउदा दर्शक नै हासेर एकदमै रमाएका छन् । यस्तो खालको दोहोरीले पहिलो पटक इन्द्रेणीमा हलचल नै मच्चाएको कुरा विभिन्न प्रतिक्रियाको आधारमा हामी सबैलाई थाहा भएको छ ! पशुपति शर्मा र जेरी ले एकले अर्कालाई तँ तँ र म म गर्दै
काठमाडौं, ४ माघ । पछिल्लो समय अन्तरजातिय विवाह अलि बाक्लै हुन थालेको छ । हालै काठमाडौंको बानेश्वर ब्याँकेटमा भइरहेको एक अन्तरजातिय विवाहले पनि सबैको ध्यान तानेको छ । बाजागाजा सहित हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार राणा परिवारको छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच विवाह भइरहेको थियो । हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार जग्य बनाइएको
admin January 16, 2020 जीवनशैली, भिडियो, मनोरञ्जन	0
झापा । झापाको दमकमा अर्का भिटेन भेटिएका छन् । ५ रुपैयाँको खाना बेचेर चर्चामा आएका कुमार राईले मिडियामा पहिलो पटक सानो भिटेनलाई ल्याएका हुन् । वास्तविक नाम भने उनको सरोज खत्री हो । तर, उनलाई सबैलाई भिटेन भन्ने गरेका छन् । उनी आफूलाई भिटेनको ठूलो फ्यान भएको बताउँछन् । उनले
शिल्पा शेट्टीको याे तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा बन्यो भाइरल, कारण सुनेपछि हाँसेरै मुर्छा!
admin January 14, 2020 गसिप, जीवनशैली, मनोरञ्जन	0
एजेन्सी- बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको एक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उनी सोही तस्वीरका कारण यतिबेला ट्रोलको शिकार समेत भएकी छिन् । सार्वजनिक तस्वीरमा उनी एक हातमा छाता र अर्को हातले आफ्नो जिन्स पाइन्ट समाउँदै निकै असहज देखिएकी छिन् । बेला- बेलामा चर्चामा आउने उनी अहिले कम्मरको साइजभन्दा
admin January 14, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन, समाचार	0
माघ ०१, काठमाण्डाै । पछिल्लाे समय निकै चर्चामा रहेकि झुप्री भण्डारीको पहिलाे गित रेकर्ड भएको छ । सिङ्गिङ रियालिटि शो द भ्वाइस अफ नेपालबाट सबैको मन जितेकि झुप्रीको पहिलो गीत रेकर्ड भएको हो । झुप्रीलाई भ्वाइस अफ नेपालसम्म पुर्याएका कमल भण्डारी फेसबुकमा पोष्ट राख्दै झुप्रीकोगित रेकर्ड भएको जानकारी गराएका
admin January 13, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन, समाचार	0
काठमाडौं । चर्चित लोकदोहोरी बाल गायिका कमला घिमिरेको पहिलो गीत ‘चिया छानेको’ नामक गीत आज सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको केन्द्रिय कार्यालयमा एक समारोहकाबीच उक्त गीत सार्वजनिक गरिएको हो । क्लबका सभापति ऋषि धमला, कलाकार तथा सञ्चारकर्मी कृष्ण कँडेल, गीतका लय सर्जक खेम सेन्चुरी, शब्द रचनाकार रमेश
चर्चित गायिका अनुराधा पौड्वालले गोप्यरुपमा जन्माएर त्यागेकि छोरी भेटिइन्
admin January 3, 2020 मनोरञ्जन	0
एजेन्सी । भारतकी चर्चित पाश्र्व गायिका अनुराधा पौड्वालले गोप्य रुपमा जन्माएर अरुलाई नै पाल्न दिएकी उनकी छोरी भेटिएकी छिन् । कर्माला मोडेक्स नाम गरेकी ४५ वर्षकी ती छोरीलाई अनुराधाले स्वीकार गरेकी छैनन् । अनुराधाले अस्वीकार गरेपछि नाता कायमको याचना लिएर कर्माला केरलाकै पारिवारिक मामिला हेर्ने अदालतमा पुगेकी छन् । कर्मालाको